The Secret House (2022) The Secret House (2022) အပိုင်းသစ် - ၅၅ ရပါပြီ ဇာတ်လမ်းရှည်ကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် Second Husband အပြီး အပိုင်း ၁၂၀ ရှိတဲ့ ဇာတ်ကားသစ်တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ သဲလွန်စတွေနောက် လိုက်လံရှာဖွေရင်း သူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်ရှိနေတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ထဲ ပါဝင်ပတ်သက်မိသွားတဲ့ ရှေ့နေတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။အဓိကပါဝင်ထားတဲ့ ကာရိုက်တာတွေကတော့...မိသားစုရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတစ်ခုကြောင့် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို ဖုံးကွယ်ထားရတဲ့ ရှေ့နေဖြစ်သူ Woo Ji Hwan ...Woo Ji Hwan ရဲ့ အချစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ထက်မြက်ပြီး နွေးထွေးတဲ့နှလုံသားပိုင်ရှင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မလေး Baek Joo Hong ...ပိုက်ဆံ၊ အရည်အချင်း၊ မိသားစုနောက်ခံစတဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမှုစစ် Nam Tae Hyung ...အစ်ကိုဖြစ်သူ Nam Tae Hyung ကို လက်စားချေဖို့ တိတ်တဆိတ်ကြံစည်နေတဲ့ ဗီလိန်မ Nam ...
Link: Eat, Love, Kill (2022) Link: Eat, Love, Kill (2022) ဇာတ်လမ်းအညွှန်း အပိုင်းသစ် (၈)(1080p ရပါပြီ) အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ True Beauty ထဲကအချောလေး အင်ဂျူဂယောင်းရယ် Hotel Del Luna ထဲကအချစ်တော်ကြီး ဂူချန်းဆောင်းတို့ရဲ့ Romance ကားသစ်လေးလာပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၀) လောက်မှာ အွန်းဂယ်ဟွန်းရဲ့ အမြွှာ ညီမလေး တစ်ယောက် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အွန်းဂယ်ဟွန်းက အရွယ်ရောက်ပြီးသား စာဖိုမှူးတစ်ယောက်အဖြစ် ရှင်သန်နေပြီး ညီမဖြစ်သူ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။တစ်ရက်မှာတော့ နိုဒါဟွန်းရဲ့ ခံစားချက်တွေ ပျော်ရွှင်မှု ဝမ်းနည်းမှုနဲ့ နာကျင်မှုတွေက သူ့ခံစားချက်နဲ့ ချိတ်ဆက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။နိုဒါဟွန်းလေးကတော့ ကံမကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်တာကြောင့် စာဖိုမှူးအွန်းဂယ်နဲ့ ခံစားချက်ချင်း ချိတ်ဆက်မိပြီးနောက်ပိုင်း ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာ ရယ်စရာလေးတွေနဲ့အတူ ကြည့်ပြီးရင်ခုန်ရမယ့် ကားလေးမို့ Channel Myanmar ကနေ အပတ်စဉ် စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော်။ (အညွှန်းကိုတော့ Hnin Pale ...
Love and Deception (2022) Love & Deception (2022) စ/ဆုံး"ချစ်ခြင်းပရိယာယ်"Cast:ဖိထရိုင် အဖြစ် Puen Khanin ပလား အဖြစ် Chippy Sirinကိုယ်ချစ်ရတဲ့မိန်းမ နဲ့ အဖေဖြစ်သူနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာကို မြင်တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေချင်တဲ့အထိ နာကျင်ခံစားသွားရပြီး အိမ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ ဖိထရိုင်အရည်ချင်းရှိတဲ့ လူငယ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက် သူတတ်ကျွမ်းတဲ့စိုက်ပျိုးရေးပညာရပ်နဲ့ နယ်ဘက်မှာ ခြံအလုပ်လုပ်ရင်း ခြံပိုင်ရှင် သူဌေးက ဖိထရိုင်ရဲ့နောက်ကြောင်းကို သိပြီး သားတစ်ယောက်အဖြစ် မွေးစားလိုက်ပါတယ်တစ်နေ့မှာတော့ ဖိထရိုင် အဖေ ရုတ်တရက်ဆုံးသွားပြီး မသေခင် သေတမ်းစာအရ သားဖြစ်သူက အရင်မိန်းမရဲ့ညီမဖြစ်သူ ပလား နဲ့ လက်ထပ်မှ အမွေရမယ်ရေးထားပေမယ့် အဖေရဲ့သေဆုံးမှုကို ပလားရဲ့ အမနဲ့သက်ဆိုင်မယ်အထင်နဲ့ ပလားကိုလက်ထပ်ပြီး အမျိုးမျိုးညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပါတော့တယ်အချိန်တစ်ခုတည်းမှာပဲ ခြံပိုင်ရှင်သမီး ပင်နဖားလည်း ဝိထိုင်ကိုနှစ်သက်နေတယ် ဆေးရုံပိုင်ရှင် စဟာထစ် လည်း ပလားကို သဘောကျနေတယ်သူတိုလေးယောက်ကြားက အချစ်တွေက ဘယ်လို ဖြစ်သွားမလဲ...?ပရိယာယ်ဆန်တဲ့ကံတရားကို မေ့ပြီး သူတိုနှစ်ယောက်ကြား အချစ်က ဘယ်လိုပေါက်ဖွားလာမလဲဆိုတာ Slap Kiss အပြင်းစားနဲ့ "ချစ်ခြင်းပရိယာယ်" လိုအမည်ရတဲ့ဇာတ်ကားမှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြရအောင်Aired: May ...
Rescue Of Heart (2022) Rescue of Heart (2022)အပိုင်း (၄၃)"နှလုံးသားတွဲလက်များ"......................................................................."ခဝမ်" ဆိုသော သရဲတစ္ဆေဝိဉာဥ်များအားမြင်နိုင်စွမ်းရှိသော အသက်ကယ်ကောင်မလေးနဲ့ "ဖေ့တ်ကလာ့" ဆိုသော အလုပ်ကြိုးစား တိကျမြန်ဆန်သောရဲအုပ်လေး တိုကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်လေးတွေပါ ရှင့်ခဝမ် ဆိုသော ကောင်မလေးက ငယ်ငယ်ကတည်းကမိခင်စွန့်ပစ်တာခံခဲ့ရပြီး မိခင်ကိုရှာဖွေနေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သရဲတစ္ဆေ ဝိဉာဥ်တွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး သူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ အကူအညီလိုတဲ့လူတိုင်းကိုကူညီနေခဲ့ပါတယ်ရဲအုပ် လေးကလည်း သူအမှုတစ်ခုကိုကိုင်တွယ်နေတဲ့အချိန်မှာ ခဝမ် ရဲ့အစွမ်းတွေကိုအသုံးချပြီး သူတိုနှစ်ယောက်ပူးပေါင်းပြီး အမှန်တရားကိုလိုက်ရှာပါ‌တော့တယ်ခဝမ် ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး အရာရာကို သိပ်အတည်တကျ အလေးမထားတတ်တဲ့‌ကောင်မလေးနဲ့ အရာရာကို စေ့စပ်တိကျသေချာစွာလုပ်တတ်တဲ့ ကိုတိကျလေးတိုနှစ်ဦးကြားမှာ ဘယ်လိုမေတ္တာနှောင်ဖွဲမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့ စုံစမ်းနေတဲ့အမှုကိုရော... အမှန်တရားပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလားဆိုတာ...အပတ်စဥ် တနင်္လာနေ့ကနေ သောကြာနေ့အထိ Channel Myanmar မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူအားပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင့်Episodes: 30Aired: April 25, 2022Aired On: Mon to FriGenres: Romance, DramaTranslated by Phyoe & Tin Me Me SoeEncoded by PinkployEpisode 1 (800MB)UsersDrive / Yoteshin ...
Rescue Of Heart (2022)
Ultimate Weapon Alice(2022) Ultimate Weapon Alice(2022) ဇာတ်လမ်းတွဲ*******************************************အပိုင်းသစ် (၁ +၂+၃) ဟန်းဂယောအူးလ် ဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာဂိုဏ်းတစ်ခုက ဖိုက်တာမလေးတစ်ယောက်..အရွယ်ကလည်းကျောင်းနေတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတက်နေလေရဲ့..တစ်နေ့တော့ ပြဿနာကြီးတစ်ခုကြောင့်ကျောင်းပြောင်းဖို့အကြောင်းဖန်လာတယ်...ကိုရီးယားကျောင်းအချို့မှာ ကြီးနိုင်ငယ်ညှဉ်းမျိုးတွေရှိတတ်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျောင်းသစ်မှာ ဒီလိုတွေကြုံရပြန်တယ်..အဲ့ဒီအချိန်မှာ ခပ်ဆန်းဆန်းကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ပြီးဒီကောင်မလေးဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ...သူ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းနဲ့လည်းဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့..အပိုင်း (၈) ပိုင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်... Episodes: 8Aired: Jun 24, 2022 - Aug 12, 2022File Size: 600MB & 300MBQuality :Web-DL 1080p,720pGenres: Action, Romance, Youth, DramaTranslated by Estel,ChitThe,So Ri & YumekoEncoded by Phyo Pyae <<<<<<TELE LINK>>>>> Episode 1 720P] [ UsersDrive | Yoteshin | MegaUp | Mega.NZ | StreamSB | VIP 1080P][ UsersDrive | Yoteshin | MegaUp | Mega.NZ ...
Ultimate Weapon Alice(2022)
It’s Beautiful Now (2022) It's Beautiful Now (2022)==================Lee Yoon-Jae (Oh Min-Suk), Lee Hyun-Jae (Yoon Si-Yoon) နဲ့ Lee Soo-Jae (Seo Bum-June) တို့က လက်ထပ်တာတွေ ရည်းစားထား တာတွေမှာ စိတ်မဝင်စားတဲ့ လူပျိုကြီးညီအစ်ကိုတွေပါ။ သူတို့ရဲ့ အဘိုး Lee Kyung-Cheol (Park In-Hwan) နဲ့ သူတို့မိဘတွေဖြစ်တဲ့ Lee Min-Ho (Park Sang-Won) နဲ့ Han Kyung -Ae တို့က သူတို့သားတွေ ဒီလိုဖြစ် နေတာကို စိုးရိမ်နေကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့သားသုံးယောက်ကို အပေးအယူတစ်ခု ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်။ ညီအစ်ကိုတွေထဲမှာ အရင်ဆုံး လက်ထပ်တဲ့ ပထမတစ်ယောက်ကို တိုက်ခန်း အပိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အပေးအယူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုနဲ့ တိုက်ခန်းလိုချင်တဲ့ ညီအစ်ကိုသုံးယောက် ကြိုးစားပြီး အပြိုင်အဆိုင် လက်ထပ်ဖို့ မိန်းမရှာကြမှာပါ။ အကြီးဆုံးအစ်ကိုဖြစ်တဲ့ Lee Yoon-Jae က သွားဆရာဝန်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ပြီး လူနာတွေကြားထဲမှာ ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားတဲ့ သမားတော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အလတ်လေးကတော့ Lee Hyun ...
Check Out (2022) Check Out(2022) Episode.3................................. လူငယ်လည်းဆန် ရိုမန့်တစ်လည်းဆန်တဲ့ BL လေးတွေမှကြိုက်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ BL fan များအတွက်Thai BL Series အသစ်လေးတစ်ခု တင်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်Nine အဖြစ် Chahub Marut Ghoummeddin Daonuea အဖြစ် Best Vittawin Veeravidhayanant တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ အသဲကွဲပြီး တစ်ယောက်တည်း ခရီးတွေထွက်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ အချစ်ကို အယုံအကြည်မရှိ စိတ်ပျက်နေပြီး တစ်ယောက်တည်းနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ တစ်ယောက်တည်း ခရီးထွက်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ အမှတ်မထင် တွေ့ဆုံမှုမထင်မှတ်ဘဲ နှစ်ယောက် အခန်းတစ်ခုကို တူတူငှားမိပြီး မျှသုံးကြတဲ့အခါ.......တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်နားလည်လာကြပြီး အချင်းချင်း ပိုရင်းနှီးလာကြချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေက ဘယ်လိုဘယ်ပုံပြောင်းလဲသွားမလဲဒီဇာတ်လမ်းလေးကို အပတ်စဥ် စနေနေ့တိုင်း CM ကနေဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် channelmyanmar.org မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါရှင်Episodes: TBAAired: June.4 , 2022Aired On: SATGenres: RomanceTranslated by AngelEncoded by Pink PloyEpisode0(600MB)UsersDrive / ...
KinnPorsche The Series (2022) Kinn Porsche the series (2022) အပိုင်း သစ် ( ၁၂ ) ----------------------------------------------------ဒီတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးမဲ့ကားလေးကတော့ BLကိုဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ အရမ်းreviewကောင်းတဲ့ကားလေးပါမာဖီယားဂိုဏ်းတစ်ခုရဲ့ ဒုတိယသားခွန်ခင်ဟာ ရန်သူပေါတဲ့အတွက် သူ့ကိုသေစေချင်တဲ့လူ များပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့ ရန်သူတွေ လိုက်ဖမ်းလို ထွက်ပြေးရင်း ဖော့ရှ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ် ဖော့ရှ်က ခွန်ခင်ရဲ့ အသက်ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဖော့က ဘားမှာ အချိန်ပိုင်း bartender ဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသားတိုက်ကွမ်ဒိုချန်ပီယံဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖော့က မြေအောက်လက်ဝှေ့ပွဲတွေလည်း အမြဲဝင်ထိုးပြီး အပိုဝင်ငွေရှာပါတယ်ကိုယ်ခံပညာကျွမ်းကျင်တဲ့ ဖော့ကို ခွန်ခင်ကသူ့ရဲ့သက်တော်စောင့်လုပ်ပေးဖိုတောင်းဆိုပေမယ့် ဖော့ကသဘောမတူခဲ့ပါဘူးငယ်ငယ်ကတည်းကလိုချင်တာမှန်သမျှရခဲ့တဲ့ကလေး ခွန်ခင်က ဖော့ကိုအမျိုးမျိုးခြိမ်းခြောက်လာတဲ့အခါမှ မငြင်းသာဘဲ လက်ခံသဘောတူလိုက်ရပါတော့တယ်သက်တော်စောင့်လုပ်ဖိုသဘောတူပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဖော့က ခွန်ခင်တိုအိမ်မှာနေဖိုပြောင်းလာခဲ့ရပါတော့တယ်ဖြေရှင်းစရာပဟေဠိတွေနဲ့ အနေနီးမှုတွေ ထိတွေ့မှုတွေကြောင့် ဖော့ဟာ ခွန်ခင်အပေါ်ခံစားချက်တွေရှုပ်ထွေးလာပြီး ရင်ခုန်သံတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ..........ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ SEUNG ဖြစ်ပါတယ်Episodes: 14 + 1 Special EpisodeAired:April.2 , 2022Aired On: SatGenres: Romance & DramaTranslated by ...
Why Her?(2022) Why Her?(2022) ဇာတ်လမ်းတွဲ***************************အပိုင်းသစ် (၈)ကိုရီးယားရဲ့အကြီးမားဆုံး Tk Group ဉပဒေရုံး ကြီ:ရှိတယ်... အူဆူဂျယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ မထင်မရှားကျောင်းလေးကနေ ဥပဒေဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် အလုပ်သင်ရှေ့နေ့ အဖြစ် TK မှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်.... အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ် ... ကျောင်းကလည်းအထင်ကြီးစရာ မရှိ ပုံစံကလည်း ချမ်းသာတဲ့မိသားစုက ဆင်းသက်လာတဲ့ ပုံမဟုတ်တဲ့အတွက် စီနီယာတွေက ရုံးစာပို့အဆင့်လောက် သာဆက်ဆံကြတယ်...အစည်းအဝေးခန်းထဲက ခွေးလိုမောင်းထုတ် ပစ်တာတွေ...စားသောက်ပွဲတွေမှာ တစ်ယောက်တည်း ချန်ထားခဲ့တာတွေ... အခြားနိုင်လိုမင်းထက်များစွာနဲ့ ဆက်ဆံခံရတယ်.. .ဒီလို အနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေ ကြောင့်ပဲ အူဆူဂျယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးအပေါ် တစ်နေ့အမြင့်ဆုံးကို ငါရောက် ရမယ်ဆိုတဲ့ အားအင်တွေဖြစ်လာပုံရတယ်... ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲ အချိန်ပြည့်အလုပ်ကို အာရုံစိုက်တဲ့အပြင် ထက်မြက်ပါးနပ်တဲ့ သူ့ဉာဏ်ရည်ကြောင့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ TKမှာ သူ့ အရှိန်အဝါဟာ ကြီ:မားလာတယ်.. ကုမ္ပဏီရဲ့ ငွေကြေးအများဆုံး ရှာပေးနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်လာသလို အခြား အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာကလည်း ကမ်းလှမ်းခံလာရတယ်...ဒီလိုထိပ်ဆုံးကိုရောက်လာတဲ့ သူမဟာလည်း ငယ်ငယ်တုန်းက ထိုးနှက်ခံရတဲ့လူတွေကြောင့် လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မနေဘူး.. ဒါ့ကြောင့်ပဲ ရန်သူတွေ မနာလိုတဲ့ သူတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေသလို ဖြစ်နေတယ်...အဆိုးဆုံးက သူမှန်တက်ထင်ရင် အစိုးရပိုင်းက အကြီးအကဲတွေ တက်သမဖို့ အထိ အူဆူဂျယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ လက်တွန့်မနေခဲ့ဘူး.... ဒီကားက ကားနာမည်အတိုင်း female lead ပေါ့..မင်းသမီးကြီး Seo Hyun Jin က အူဆူဂျယ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတယ်.. သူ့ဇာတ်လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် လုပ်ကွက်တွေအများကြီး ရသလို မင်းသမီ:ကြီးက အစွမ်းကုန် စကေးတွေပြထားတယ်... သူ့ကြောင့်ပဲ ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ မန်ထည်ဝင့်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်... အရယ်အပြုံးနည်းစွာနဲ့ လမ်းလျှောက်ဟန် စကားပြောဟန်နဲ့ ခပ်ထေ့ထေ့တွန့်ကွေးတတ်တဲ့ ...
Love Mechanics (2022) Love Mechanics (2022)Ep.3 ****************BL ကြိုက်တဲ့ ချစ်တို့အတွက် နောက်ထပ် BL ကြမ်းကြမ်းလေးတစ်ကား CM ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်**ဝီး အဖြစ် Yin Anan Wong **မာ့ခ် အဖြစ် War Wanarat Ratsameerat တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းဘားလို့ခေါ်တဲ့ စီနီယာအစ်ကိုကြီးကို တဖက်သတ်လိုက်ကြိုင်နေတဲ့ မာ့ခ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးမာ့ခ် တစ်ယောက် နေ့စဥ်နေ့တိုင်း ဘား နောက်ကို လိုက်ပြီးနှောက်ယှက်နေခဲ့တယ် ဘားရဲ့ သူငယ်ချင်းဝီးက ဒါကို လုံးဝ ကြည့်မရခဲ့ဘူး ဝီးက ဘားနဲ့ ဝေးဝေးနေဖို့ မာ့ခ်ကိုသတိပေးခဲ့တယ်ဒါပေမယ့် တစ်ရက်မှာတော့ ကြီးမားတဲ့ ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုကို မာ့ခ်နဲ့ဝီး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ် မာ့ခ်ကတော့ သူနဲ့ဝီးကြားက ရေစက်တွေကို အဆုံးသတ်ချင်ခဲ့ပေမယ့် ဝီးက လက်မခံခဲ့ဘူး ဝီးမှာ ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူရှိနေပေမယ့် မာ့ခ်က ဝီးကို သဘောကျသွားခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားက ဆက်ဆံရေးတွေ အဆင်ပြေသွားနိုင်မလား သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်း​ပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဝီးဘာဆက်လုပ်မှာလဲ ဘာကိုရွေးချယ်မှာလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင်Episodes: TBAAired: June.18 , 2022Aired On: ...